Toban ka mid ah barnaamijyadooda ugu wanaagsan samaynaya si aad shopping Christmas - Rule News
Toban ka mid ah barnaamijyadooda ugu wanaagsan samaynaya si aad shopping Christmas
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Toban ka mid ah barnaamijyadooda ugu wanaagsan samaynaya si aad shopping Christmas” waxaa qoray Stuart ku milmaya, waayo theguardian.com on Saturday 28 November 2015 07.00 UTC
Waa sano in badan oo tan iyo fikradda ah adeeganayay on your phone ma - ama "m-commerce" sidii erey ee waqtiga ku rid - waxaa qoslay at by khubaro badan. Yaa dhab ah alaabtii ka in qalab yar ee jeebka ay ku iibsan lahayd? Sida ay soo baxday, dad badan oo.
Casriga ah iyo kiniiniyada laga yaabaa in aan marnaba si buuxda u badalo jahannamada dibadda thrills visceral ee kusoo dhex jidkaaga wareega isugu dukaamada-jidadka sare leh 17 bacaha in gacanta, laakiin qayb ka mid ah qorshaynta, Qalabka aad mobile kuu tudhi karaa shaqada adag.
Sida 2015 ee xilli shopping Christmas galaa kasii darto, halkan waa qaar ka mid ah barnaamijyadooda ugu wanaagsan ee ay caleenta iyo iibsato hadiyado aad ugu dhow, aad curiso, oo aad kali-yaqaan asxaabteena shaqada aan seefteedii oo Santa Qarsoon.
Amazon ayaa muddo dheer go-to a qabashada for Christmas shopping, in feature Barca ay mahad, talooyinka iyo dib u eegis, iyo - haddii aad bixiso ay Times Ra'iisul - maraakiibta degdeg ah waayo argagax daqiiqadii ugu danbeysay soo iibsataa markii eedo dheeraad ah ama laba Xaqiijisay qado Christmas.
Haddii aad raadineyso weeyna hadiyado leftfield dheeraad ah oo loogu talagalay dadka aad runtii u daryeeli ku saabsan, saacad ama laba dhirta ah Etsy dhali kartaa badan oo possibles. Its focus on "handmade, guridda iyo alaabta hal abuur leh "waxaa loola jeedaa waxaad ka heli doontaa hadiyado ka baxsan waxa aad aragto ee dukaamada silsilad weyn - in kasta oo alaabta maraakiibta ka dibada, waxaad u baahan tihiin si aad u dalbato hore.
Pinterest ma aha app shopping in qaybo badan oo adduunka ah, weli, inkastoo ee Maraykanka ayaa soo bandhigay "Musmaarradii buyable" si ay u iibsadaan alaabta gudahood app. Waayo, mid kasta oo kale oo, Pinterest waa hab la yaab xitaa fikrado - hadiyado ka mid ah - oo ugu wanaagsan si ay u loox aad u badbaadiso tixraac muddada pre-Christmas. Waxaad kaloo isticmaali kartaa app in ay wareemo photos of waxyaabaha aad aragto halka wareegaysa dukaamo-dunida dhabta ah.
Depop garab Etsy fadhiyaa sida il wanaagsan ee ay hadiyado u xiiso badan oo u gaar ah, la ahi.Waxa dhinaca design, fashion guridda, vinylalkohol iyo tababarayaal. Waa app si fiican u maleeyay-baxay in kastoo, la chat - iyada oo comments iyo fariimo toos ah - qayb muhiim ah oo go'aan ka waxa aad rabto in aad soo iibsato. Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa sida iibiyaha ah, haddii aad alaabta lagu baddalo helay in ku haboon ay asal ahaan hal abuur leh.
A Gogoldhiga shopping Christmas ma noqon doono dhamaystiran oo aan Arbacada ah, taas ayaa solidly shaqeeyay on apps ay mobile sannadihii la soo dhaafay si aad u sida deg deg ah oo la heli karo sida ugu macquulsan. Koll waxyaabaha aad waxey dooneysaa tahay on shuqullada si fiican marayo app ee qaababka farriimaha, halka ay feature barcode-iskaanka weli muhiim u ah hubinta qiimaha Arbacada ah waxyaabaha aad aragto dukaamada jirka.
Gift Finder by Aan On Street Sare
Ikhtiyaar kale qof kasta oo raba in ay eegaan ka baxsan hadiyado cad Christmas this. Mid ka mid ah qaababka ugu waxtarka Gift Finder ee waa awood u leh inay qodo hoos gelin waxyaabaha ay sida ay miisaaniyada iyo qaataha: tusaale ahaan, search a for £ 50- £ 100 hadiyado ah guriga kuwa kibirka-"style icon" lab kor u keentaa murriyado, satchels, sanduuqyada cufflink iyo daabacayaa kala duwan.
Dhab ahaantii app ugu fiican shopping magaceeda la Iggy Azalea song wadaago, laakiin sidoo kale mid ka mid ah siyaabaha slickest in caleenta, wadaagaan oo iibsan hadiyado. element bulshada waa qeyb weyn oo ah fanaaniinta: sida on Pinterest, waxaad dhistaan ​​ururin adiga kuu gaar ah ee alaabta in saaxiibo ka arki kartaa. Note, lacagta default waa dollars, laakiin waxaad bedeli kartaa in pounds in la door ah, iyadoo liiska muujinaya in markabka alaabta UK.
Bal qiyaas haddii Sean Connery soo qaaday doorka Captain Kirk ee Star ugu celiso… kaftanka tabar yar oo ku saabsan magaceeda ku leexan, Schpock sidoo qiimihiisu yahay rootle dalwaddii in la kulankooda ka hor si Christmas. laftiisa Hababka The app sida a "sale boot iyo classified app", iyadoo culayskana la saarayo alaab labaad ee qaybaha guriga iyo beerta ama ilmaha oo ilmaha si firaaqada iyo ciyaaraha. Waxa kale oo uu leeyahay diiradda a maxalliga ah: muujinayo waxyaabaha kuu dhow iyo bixinta awood u leh inay su'aalo weydiiso ama dalabyo gaar ah.
Qayb ka mid ah qoyska weyn ee apps shopping Kaapelitalo by sameeysa ContextLogic - Home daboolayaa design iyo Qurxinta, Cute daboolayaa quruxda iyo wixii la mid ah - Geek waxa laga yaabaa inay ugu rafcaanka haddii aad dhahnaa yin ah technology. Ka dib markii weydiinaya waxa aad jeceshahay si ay u iibsadaan, waxa aad abuuraa feed ka mid ah waxyaabaha kor u balanqaaday in ay 80% dhimis. Worth isha ku hayo wixii hadiyado casriga aad tixgelinayso.
Britishka, eh? Waxaan ku qanacsanahay in ka badan ku faraxsan yihiin inay saf ilaa dukaanka jirka ah in uu akhriyo buugga a, ku qor lambarada hoos on warqad la qalin yar, markaas plonk saarno on kursi ilaa aannu tirada loo yaqaan. Argos shopping, inay cadaalad tahay in la yidhaahdo, waa mid ka mid ah quirks qaranka. si farxad leh, app tafaariiqle ee sidesteps sugaysaa ah: waxaad isticmaali kartaa ka dibna midkood reserve waayo-dukaanka ururinta ama bixinta. No qalin baahan yahay.
Waa kuwa talo noo, laakiin waxa apps in aad la isticmaalayo si online dukaameystaan, in aad ku talin lahaa in la kulankooda ka hor si Christmas? qaybta comments wuxuu u furan yahay fikirkaaga.
28433	0 Amazon.com, Apps, Qodobka, Best apps Android, Best apps iPhone iyo iPad, Christmas, E-Ganacsiga, Arbacada ah, Features, Internet, Telefoonada Mobile, Pinterest, safarada Shopping, Telefonada casriga ah, Stuart ku milmaya, Technology
← cannabis Sigaar-xoog sare laga yaabaa iney waxyeello fiiloyin dareemeyaasha ee maskaxda iPad dib u eegis Pro - mustaqbalka hal abuur ka raadinaya wanaagsan →